Home Wararka Mid kamida kuraasta Senator-ka Jubbaland oo lagu kala iibsaday in ka badan...
Mid kamida kuraasta Senator-ka Jubbaland oo lagu kala iibsaday in ka badan $250 kun oo doollar
Mid kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Feysal Roobe ayaa sheegay in mid kamida kuraasta Aqalka Sare ee dhawaan lagu soo doortay magalaada Ksimaanyo lagu kala iibsaday in ka badan $250,000 kun oo dollar.
Feysal ayaa sheegay in beecinta kursigaan ay dhexmaratay sadax qaybdood oo isku dan wada ah; hogaanka Jubbland, Hogaanka Puntland iyo milkiilayaasha Maqaayadaha lagu magacaabo CJ’s ee fadhigeedu yahay dalka Kenya.
Warar dheeraad ah oo ay MOL ayaa sidoo kale sheegaya in Axamad Madoobe ku da’daalay in ayan marnaba soo bixin xildhibaano aan isaga u ahayn daacad, isla markaana ku shaqeeynaya oo kaliya awaarmiirtiisa.
Qaar kamida musharxaiinta Madaxaweyaaha ayaa durbadiida sheegtay in ay saaxibadooda la soo doortay, laakiin waxa ay lunsan yihiin, sida uu sheegay mid kamida Senatarada la soo doortay.
“Walaahi lacagta aan ku gulay doorashada xitaa waxa iga bixiyay Axmad Madoobe, waxa aan ka shaqayn doonaana waaa waxa uu isagu rabo ama ii diro, marnaba ma dooran doono musharax uusan wadanin Axmad Madoobe, rag baan horay u soo wada shaaqeeynay, laakiin xaalada hada waa ay ka duwan tahay tii hore danahuna waa ay isbadaleen” sidaas waxaa jiri mid kamida afarta musharax ee dhawaan laga soo doortay Jubbaland, waxa uuna ka gaabsaday in aan magaciisa sheegno.